Bogga ugu weyn Faallooyinka Caafimaadka IQ ee 2021: Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Hab -nololeed caafimaad qaba waxay hagaajisaa isku-kalsoonaantaada, is-sawiridda, iyo samaqabkaaga guud. Si aad mar kale ugu celiso muhiimada ku noolaanshaha caafimaadka leh - Health IQ ayaa ku abaalmarisa.
Inaad noqoto qof miyir-qaba caafimaadku waxay si qoto dheer uga tarjumi doontaa doorashadaada cuntada, jimicsiga joogtada ah, iyo guud ahaanshaha caafimaadka. Waxa xiisaha lihi leh, akhrinta maqaalkani waxay kaa fogeyneysaa sida loogu helo abaalmarinno hab nololeedkaaga caafimaad qaba.
Dib -u -eegista Caafimaadka IQ waxay sheegaysaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha shirkadan caymiska caafimaadka. Sidoo kale, waxaad ka heli doontaa sharraxaad cad oo ah waxa uu sameeyo IQ Health, qiimaheeda, astaamihiisa, iyo cidda ay tahay inay adeegsato shirkadan.
Waa Maxay Dib -u -eegista Caafimaadka IQ?
Doorashada inaad ku noolaato qaab nololeed caafimaad leh ayaa ah faa'ido aad u weyn iyo inaad dhiirrigeliso waxqabadkaan - Caafimaadka IQ wuxuu abaalmariyaa qof kasta oo doorta qaab nololeedkan.
Health IQ waa xayndaabka caymiska caafimaadka oo leh hawl cad oo sheegaysa sida ay uga go'an tahay abaalmarinta dadka doorta inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh.
Ka dib Munjal Shah ganacsade Hindi Mareykan ah wuxuu ka iibiyey shirkaddiisii ​​ugu horreysay Google 100 milyan oo doolar, dhalashada Caafimaadka IQ ayaa la arkay.
Intii lagu guda jiray iibintaan, wuxuu ka xanuunsaday xabadka, taasoo keentay inuu sariirta jiifto. Tani waxay ku kalliftay inuu go'aansado inuu ku noolaado qaab nololeed caafimaad leh.
Ka sokow ku noolaanshaha hab -nololeed caafimaad leh, wuxuu ballanqaadyo u qaaday baridda dadka kale muhiimadda ay leedahay hoggaaminta hab -nololeedyo firfircoon.
Ka dib markii la sameeyay cilmi baaris caafimaad IQ 2013, Munjal wuxuu dadka ogeysiiyaa in daryeelka wanaagsan ee kaabayaasha caafimaadkaaga aad adigu cimri dheer tahay oo aad caafimaad qabtid.
Markaa, Munjal wuxuu aasaasay Caafimaadka IQ sanadkii 2013 si loogu dabaaldego kuwa durba qaadanaya go'aanno mas'uuliyad leh. Yogis, culeys -saarayaasha, khudaarta cagaaran, ama xitaa bukaanka qaba sonkorowga oo qaata tallaabooyin ay ku daryeelaan naftooda ayaa sacab ka hela Caafimaadka IQ.
Tan badanaa waxaa lagu sameeyaa iyada oo la siinayo qiimo dhimis caymiska Caafimaadka IQ dadka ku jira qaybtaan. Markii hore, tani waxay ku bilaabatay maalgelin hore oo ah 35 milyan oo doollar. Maanta, Munjal's Health IQ waa mid ka mid ah warshadaha ugu weyn ee caymiska nolosha adduunka oo qiimihiisu ka badan yahay 29 bilyan oo doollar.
Tirakoobyada kor ku xusan waxaa ka mid ah - caymiska nolosha iyo caymiska la bixiyay.
Sidee buu u shaqeeyaa Caymiska Caafimaadka IQ?
Health IQ waxay ku lammaanaysaa shirkado shuraako ah oo bixiya caymisyo. Waxay u shaqaysaa sidii nin dhexe oo caymis caafimaad ah.
Ka dib markii uu kugu qiimeeyo qiime dhimis, Health IQ wuxuu kugu lammaaneeyaa shirkadaha caymiska nolosha ee bixiya siyaasadaha caymiska.
Asal ahaan, shirkadu waxay u qoondeysaa dhibcaha qayb kasta oo aad u qalanto. Iyada oo ku xidhan qaybta, waxaad heli kartaa 8% kaydinta akhris -qoraalka caafimaadka, 9% kaydinta si aad u hoggaamiso hab -nololeed firfircoon, iyo in ka badan 24% kaydinta arrimo kale oo hoosta ku qoran.
Si aad ugu raaxaysato faa'iidooyinkan iyo wax ka badan, waa inaad maraysaa hab saxeex oo adag kaas oo ku lug leh ka jawaabista su'aalaha. Si aad isu diiwaangeliso, waa inaad qaadataa:
Tallaabada 1 - Kediska caafimaadka aasaasiga ah
Su'aalaha heerkan diiwaangelinta waxay raadinayaan inay fahmaan xaaladdaada caafimaad ee hadda. Haddii jawaabtaadu ay ku habboon tahay waxa ay raadinayaan, waxaad gurigaaga ka heli doontaa baaritaan caafimaad oo lacag la'aan ah.
Tallaabada 2 - Kediska IQ Caafimaadka
Kediska caafimaadka aasaasiga ah kadib, waa inaad dhammaystirtaa imtixaanka akhris -qoraalka caafimaadka. Su'aalaha qaybtan waxay tijaabinayaan aqoontaada macluumaadka caafimaadka aasaasiga ah.
Su'aasha kala duwan ee ka soo baxda shaashaddaada waxay la xiriirtaa caafimaadkaaga iyo sidoo kale mabaadi'da nolosha ee caafimaadka leh.
Natiijooyinkan imtixaanka akhris -qorista ee Caafimaadka IQ wuxuu dhaliyaa xigashooyin caymis oo abaalmarin doona doorashadaada hab nololeed caafimaad leh iyo aqoon.
Tallaabada 3 - Su'aalaha IQ ee caafimaadka hab -nololeedka Caafimaadka leh
Tallaabada xigta inta aad is -diiwaangelinayso waa qayb kedis ah oo tijaabisa aqoontaada ku saabsan sida loogu noolaado hab -nololeed caafimaad leh. Asal ahaan, waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso inta aad caafimaad tahay; markaa waxaad dooranaysaa qorshe.
Tallaabada 4 - Xaqiijinta caafimaadkaaga
Habka codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad caddeyso heerka jirdhiskaaga ama waxqabadkaaga. Halkan, waxaad xaqiijinaysaa hab -nololeedkaaga caafimaad qaba. Inta badan, waxaad ku xaqiijin kartaa caafimaadkaaga siyaabaha soo socda:
Socodka: Waxaad u baahan tahay inaad dhammaystirto 8-mayl mayl ama u dhigma da'da
Baaskiil wadid: Waxaad u baahan tahay inaad dhammaystirto 50+ mayl
Dabaasha: Codsaduhu wuxuu ku tartamayaa kulan
Noocyada kale ee jimicsiga.
Tallaabada 5 - Dooro Qorshe
Qaybaha ugu dambeeya ee habka arjiga ayaa soo baxaya shaashad halkaas oo aad ku dooran karto caymiska nolosha. Halkan waxaad ka dooran kartaa caymiska nolosha in ka badan 30 wada -hawlgalayaal sida - Mutual of Omaha, Prudential, iyo John Hancock.
Dhab ahaantii, haddii aad iska diiwaangelisid Health IQ ee calaamadahan sare, waxaad heli doontaa qiimayaal aad uga hooseeya intii aad si toos ah ula saxiixan lahayd shirkadahan caymiska.
Dib -u -eegista Xulashada IQ ee Daacadda ah 2021: Platform Trading Legit ama Fadeexad Forex.
Yay tahay inuu isticmaalo IQ Caafimaadka? Dib -u -eegista Caafimaadka IQ
Waxa soo socda waa ballanqaad xagga abaal -marinaysa dadka doorta inay ku noolaadaan hab -nololeed caafimaad qaba, Caafimaadka IQ sida iska cad ma ahan qof walba.
Barnaamijku wuxuu ugu fiican yahay dadka soo socda:
#1. Dad firfircoon oo caafimaad qaba
Kani wuxuu u muuqdaa inuu yahay luqadda kaliya ee IQ Caafimaadku fahmo oo dhiirrigeliyo. Marka, haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato barnaamijkan caymiska nolosha, waa inaad noqotaa mid firfircoon oo caafimaad qaba.
Waa inaad miyir qabtaa caafimaadka oo aad u qalanto inaad ku noolaato qaab nololeed firfircoon. Shahaadada waxaa lagu ogaan karaa orodka, dabaasha, baaskiilka, tababarka tartanka, yoga iyo culeyska.
#2. Cunto -yaqaanka Caafimaadka leh
Si aad ugu raaxaysato dheefaha IQ Caafimaadka sida qof aan firfircoonayn, waa inaad noqotaa cunto -yaqaanka caafimaadka qaba. Asal ahaan, vegans iyo vegetarians ayaa la tixgeliyaa dadka leh doorashooyin cunto caafimaad leh.
Tani waa sababta oo ah cilmi-baaristu waxay go'aamisay in cunnooyinka dhirta ku salaysan ay aad ugu yar yihiin halista qaadista waxyaabaha sida kansarka iyo cudurrada kale ee dhimashada.
# 3. Ciyaaraha fudud
Ciyaartooydu waa dad kale oo ka faa'iidaysan kara adeegyada caymiska IQ ee caafimaadka. Marka hore, waa dad firfircoon marka loo eego xirfadooda. Waxayna leeyihiin tirooyin BMI oo ka sarreeya kan celceliska qofka.
#4. Cilmiga Caafimaadka
Habkan keliya ayaa laga yaabaa inaan la hubin, laakiin wuxuu haystaa fursad. Cilmi -baarista IQ ee Caafimaadka ayaa muujineysa in shaqsiyaadka leh heerka aqoonta sare ee caafimaadka ay muujinayaan halista 35% hoose ee dhimashada aan degdegga ahayn.
Markaa, tani waxay ka dhigan tahay inay ka warqabaan waxa loo baahan yahay si loogu noolaado qaab nololeed caafimaad leh. Samaynta kediska IQ Caafimaadka, tani waxay ka tarjumaysaa. Haddii ay dhab ahaantii ku noolyihiin nolol caafimaad leh lagama yaabo in la tixgeliyo oo keliya.
Caymiska nolosha IQ wuxuu rumaysan yahay in wax badan oo ku saabsan caafimaadku kaa dhigayo caafimaad. Tani waa waxa IQ caafimaadku ku abaalmarin karo.
Yaa Aan Isticmaalin Caymiska Nolosha IQ Caafimaadka
Faallooyinka Caafimaadka IQ waxay door bidaa in barnaamijkani hubaal uusan ahayn qof walba. Uma fiicna dadka aan qalbigooda u qaadan baahidooda caafimaad.
Haddii aad ku dhacdo qaybahan:
#1. Cunnooyinka Cuntada
IQ Caafimaadka ma aha mid adiga kuu gaar ah haddii aad jeceshahay inaad kaydiso cuntada aad ugu jeceshahay adiga oo aan ka walwalin kalooriyada. Caafimaadka IQ wax badan kaa tari maayo. Waa hagaag, waa inaad isku daydaa qaadashada kediska caafimaadka. Waxaa laga yaabaa inay tani kaa caawiso inaad qaddariso muhiimadda hab -nololeed caafimaad leh.
#2. Dadka Samir -laawayaasha ah
Haddii aad ka xumaato buuxinta foomamka dhaadheer, Caafimaadka IQ sida muuqata adiga kuma aha. Dalbashada Caafimaadka IQ waa habsocod codsi oo dheer oo ku lug leh ka jawaabidda su'aalo taxane ah.
Haddii tani ay tahay hawl herculean ah, iska dhaaf IQ -da caafimaadka oo aad tartamayaasheeda.
Waa maxay Adeegyada Caymiska Caafimaadka IQ?
Ubucda jiritaanka IQ -yada Caafimaadka ayaa ah isku -duwaha bulshada si ay ugu noolaadaan hab -nololeed caafimaad leh. Tani waxay ku sameeyaan iyagoo u siinaya heerar caymis oo ka wanaagsan dadka daryeela caafimaadkooda.
Qaar ka mid ah adeegyada caymiska IQ ee caafimaadka waa:
#1. Caymiska Nolosha
In kasta oo Health IQ aysan bixinayn caymis, waxay u shaqaysaa sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya dadka ku nool hab nololeed caafimaad leh durba iyo shirkadaha caymiska sare.
Iyada oo leh IQ caafimaad, macaamiishu way awoodaan kaydso ilaa $ 11, 000 in ka badan siyaasad 30 sano ah. Iyada oo la xaqiijinayo xaaladaha oo dhan, IQ -da Caafimaadka waxay hoos u dhigi kartaa sicirka caymiska macaamiisheeda. Adeeggan caymiska Caafimaadka IQ waa mid ka mid ah adeegyadiisa muhiimka ah.
#2. Dheeraadka Medicare
Caafimaadka IQ wuxuu abaalmariyaa dadka waayeelka ah ee aqoonta sare u leh arrimaha caafimaadka. Adeegan caymiska caafimaadka IQ waxaa kaliya bixiya caymiska nolosha IQ.
#3. Caymiska Nolosha ee Sokorowga si fiican loo maamulay
Cilmi -baarista IQ ee Caafimaadka ayaa muujineysa in qaab -nololeed caafimaad leh uu yareyn karo heerka dhimashada bukaannada macaanka qaba.
Marka, waxay siisaa qorshe khaas ah dhammaan bukaannada sonkorowga qaba oo si wanaagsan u maamula xaaladdooda sonkorowga. Adeeggan caymiska Caafimaadka IQ wuxuu u adeegaa sidii qorshe abaalmarin shaqsiyaadka ka warqaba caqabadaha caafimaadkooda.
#4. Caymiska Naafada
Caymiskani wuxuu daboolayaa dadka naafada ah ee aan shaqayn karin- dhaawac ama jirro awgood.
Markaad qaadanayso kediska caafimaadka, Caafimaadka IQ wuxuu tixgaliyaa kuwan iyo in ka badan si uu kuu helo qiime ka wanaagsan.
Waa imisa Qiimaha IQ Caafimaadka?
Caafimaadka IQ gabi ahaanba waa u bilaash qof walba; si kastaba ha ahaatee, macaamiishu waxay bixin doonaan khidmadda caymiska nolosha ee gaarka ah iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka lacag la'aanta ah.
Farqiga aasaasiga ah ayaa ah inaad heshid qiimayaasha ugu hooseeya ee suurtogalka ah adigoo isticmaalaya nidaamka qiimeynta IQ ee Caafimaadka.
Tan, waad awoodaa badbaadi ilaa 41% qiimayaasha siyaasadda caadiga ah. Caymiska nolosha IQ ee caafimaadku wuxuu leeyahay qaab qiimayn oo ka duwan oo ku salaysan saddex qaybood oo keliya oo caafimaadka ah - Macmiilka
xaaladda caafimaad ee hadda
heerka aqoonta caafimaadka
heerka dhaqdhaqaaqa nolosha
Isku soo wada duuboo, IQ Caafimaadka waa bilaash oo waxaad heleysaa qiimo dhimis caymis nololeed si aad ugu noolaato nolol caafimaad leh.
Caafimaadka IQ Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Caafimaadka IQ sida iska cad waa mid ka mid ah qalabka isbarbardhigga caymiska nolosha ugu fiican.
Fikrad aad u xasaasi ah oo laga yaabo inay ka soo baxdo akhrinta qaybtan ayaa ah sidee ayay IQ Caafimaadka u samaysaa lacag?
In kasta oo Health IQ ay sheegato inay dadka ku abaalmariso qaab nololeed caafimaad leh, sharraxaadda farsamo ee ka dambaysa dhimista ay bixiyaan waa - uma badna inaad xanuunsato.
Cilmi -baaris ay samaysay hay'adani waxay u soo bandhigaysaa shakhsiyaadka ku nool hab -nololeed caafimaad qaba inay 36% ka hooseeyaan halista dhimashada degdegga ah, 57% khatarta cudurrada wadnaha oo hooseysa, iyo 88% halista hoose ee macaanka nooca 2.
Adigoo adeegsanaya tirakoobyadan, Health IQ waxay heshaa saxiixyo dhowr ah laakiin way yar yihiin bukaannada. Iyada oo leh xulashooyinka xulashada, uma badna inaad xanuunsato haddii aad hore u lahayd qaab nololeed caafimaad leh.
Markaa waxay siiyaan dad aad u tiro badan oo laga yaabo inay ku yareeyaan qiimo dhimisyo ku saabsan siyaasadaha caymiskooda.
Jadwalka hoose wuxuu soo koobayaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha isticmaalka IQ Caafimaadka.
Faallooyinka IQ Caafimaadka - Faa'iidooyinka
Faallooyinka IQ Caafimaadka - Qasaarooyinka
Waxay tixgelisaa qodobo muhiim ah Habka codsigu waa mid adag oo daal badan
Hawlahaaga waxaa loo isticmaalaa si kor loogu qaado xaaladdaada caafimaad guud Shirkado shuraako xaddidan leh oo aad kala dooran karto
Waxay ku siisaa sicir -dhimista ugu fiican marka la barbar dhigo sumcadaha kale ee waaweyn ee warshadaha Khibrada adeegga macmiilka oo liidata
Isticmaalayaasha ayaa badbaadin kara ilaa 41% dhimista caymiska nolosha Ma aha doorasho weyn dadka kale ee aan firfircoonayn ama aan caafimaad qabin
Bukaannada sonkorowga qaba waxay helaan qorshe magdhaw siiya marka ay si fiican u maareeyaan xaaladdooda.
Waxay bixisaa qorshe waayeel dabacsan oo siiya sicir -dhimis waayeelka miyir -qabka ah ee caafimaadka leh
Shakhsiyaadka naafada ah ayaa ka faa'iideysan kara qorshahooda caymiska nolosha ee gaarka ah
BOOQO CAAFIMAADKA IQ HADA
Haddii aad beertay hab nololeed caafimaad leh oo aadan lahayn caymis jira - Caafimaadka IQ waa doorasho weyn.
Noloshaada caafimaad qabta, waxaad ku qasban tahay inaad u hesho dalabyo la yaab leh abaalmarin ahaan. Oo, haddii abaalmarin ay micnaheedu tahay wax adiga kugu jira, ka dhex akhri qodobkan si aad u bilowdo safar la yaab leh.
Asal ahaan, Caafimaadka IQ waa sharci oo ma aha khiyaamo waxayna kuu haysaa dalabyo xiiso leh. Habka yar ee ay ugu mahadcelinayaan doorashada qaab nololeed caafimaad leh.
Lacagta Ka Yar 30. com - Dib u Eegista Caafimaadka IQ
bbb.org - Adeegyada Caymiska
Rootfin.com - Caymiska Nolosha ee Caafimaadka IQ
Aamin Pilot.com - Dib u Eegista Caafimaadka IQ
FundRise ma sharci baa? Faallooyinka Fundrise
Faallooyinka Visualizer Portfolio
15 Shaqooyinka Waqti-Gaarka ah ee Caymiska Caafimaadka
Kaadhka Debit -ka Hore ee Famzoo U Qalmay? Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | 2021 Dib u eegid.
Ma ogtahay in lacag lagu siin karo si aad fikradahaaga ula wadaagto ?! Haa! Naxdin sida ay tahay,…
Sidee bay Qorshayaasha Ka-saariddu u caawiyeen UK iGaming Sphere 2021?
In kasta oo ciyaaraha muqaalku ay yihiin waxqabadyo madadaalo oo qof kastaa ku raaxaysan karo inta lagu jiro wakhtiga firaaqada, waxay si dhakhso ah u noqon karaan…
Socodka Socdaalka ee Kooban Einstein | Dib -u -eegista Buugga 2021
Waxay dhacdaa mar walba. Iyagoo ku dhibtoonaya inay wax walba la socdaan, bini'aadanku waxay u muuqdaan inay iloobaan raashinka ay…
Faallooyinka Caymiska Liinta 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Lemonade waa mid ka mid ah shirkadaha caymiska ugu sarreeya adduunka oo qiimo badan siiya dadka Mareykanka. Waxaan samaynay…